FACEBOOK TENY GASY – Blaogin'i Voniary
Asa raha fantatrao, efa misy teny malagasy izao ny Facebook! Raha efa mampiasa ianao dia zarao amin’ny alalan’ny #facebooktenygasy ny fihetseham-ponao. Ho ahy aloha, mahafinaritra ny mahita ireo voambolana vaovao sady maha te-hidera ny finiavan’ireo tompon’andraikitra mikaroka ny teny mifanaraka amin’ny zava-misy.
FACEBOOK TENY GASY: IREO VOAMBOLANA
Mety manahirana na tsy mahazatra anao angamba ny teny ampiasaina ao fa tsy maninona. Eo am-pandrasana mahita ny atiny hoy ny fitenenana. Ireto ary misy voambolana vitsivitsy mety hanampy anao:
TENY MALAGASY : REHAREHAKO
Tsarovy fa tsy amin’ny literatiora sy riba ihany no maha-Malagasy. Amin’ny fiainanao andavanandro no tokony anehoanao fa Malagasy ianao, eny hatramin’ny fihetsika bitika indrindra aza. Io Facebook amin’ny teny gasy io dia santionany fotsiny. Efa azonao jerena hatry ny ela eto amin’ny aterineto izao ny rakibolana Malagasy, ny ohabolana, ny kabary… Efa misy koa ny google.mg, sy ny google dikan-teny ary ny Wikipedia amin’ny teny gasy. Ny boky Malagasy koa, tsy ireny noterena novakiantsika tany an-tsekoly ireny ihany fa marobe sady misy isan-tsokajiny: tantara foronina, tononkalo, toe-karena, politika, fampivelarana ny maha-olona sy ny sisa. Ny hira Malagasy koa betsaka no tsara fa tsy ireny hitanao amin’ny fahitalavitra atao dridrangilo ireny ihany. Vokatry ny fikarohana, famoronana sy finiavan’ny malagasy ireny ary natao ho antsika malagasy.
Hoy ny fiteny any avaratra any izay hoe “Tano ny an-tena fa ny an’olo tsy omeny”. Koa, aza dia variana amin’ny zavatra avy any ivelany re fa ifalio ny antsika malagasy e!
Fanagasiana, kolontsaina, maha-malagasy, malagasy, teny gasy, teny malagasy